China Ọka nhicha Equipment Factory, ọka nhicha Equipment Supplier
Ihe omimi di omimi
Ihe omimi di omimi bu ihe ndi ozo maka ime ka mmiri kpochapu ahihia n'ime ihe eji eme ahihia. ike ma belata nrapado nke bran na endosperm nke bara uru iji melite arụmọrụ nke egweri na sie sieving.Besides, ọ na-enye aka iji melite ntụ ntụ na àgwà pink. Igwe ahụ nwere uru nke mmepụta dị elu, obere ike ike, ịdị arọ dị arọ, olu na-egbu mmiri dị elu, mmiri ozuzo na-agbanwe agbanwe, nke siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya na ọnụego ọka wit dị ala. N'ime usoro dampening na ọka ọka ọ na-ekere òkè dị ka onye na-ehicha ihe.Ọ dabara adaba maka mgbanwe teknụzụ na nnukwu, ntụ ọka na obere ntụ ọka na nhọrọ nke igwe ọka ọhụrụ.
MLT Usoro Degerminator
Igwe ahụ maka degerming ọka, kwadebere ya na ọtụtụ usoro dị elu, na-atụnyere igwe yiri ya site na mba ofesi, usoro MLT nke degerminator gosipụtara na ọ kachasị mma na ịsacha na usoro mmechi.
A na-ejikarị aspirator na-emegharị ikuku maka ihe ndị granular na-ehicha na nchekwa ọka, ntụ ọka, nri, ọgwụ, mmanụ, nri, brewing na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Onye nwere ike imegharị ikuku nwere ike ikewapụ adịghị ọcha na ihe granular (dịka ọka wit, ọka bali, paddy, mmanụ, ọka, wdg) na ọka. Onye na-enyocha ikuku na-eme ka ikuku ikuku mechiri emechi, yabụ igwe ahụ n'onwe ya nwere ọrụ nke iwepụ ájá. Nke a nwere ike ịchekwa igwe ndị ọzọ na-ewepu ájá. Ma n'ihi na ọ naghị agbanwe ikuku na ụwa dị n'èzí, ya mere, ọ nwere ike izere ọnwụ nke okpomọkụ, ọ dịghịkwa emetọ gburugburu ebe obibi.
Igwe na-ahụkarị ihe na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọwa mmiri ma ọ bụ ọwa mmiri na-achọgharị na ntanetị. Ha nwere ike rụọ ọrụ nke ọma tufuo detached shei ahụ ma ọ bụ elu unyi si ọka.